रूस, उत्तराधिकार व्यवस्था सुधार
राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन आज को महत्व जोड ग्रहण गरेर संघीय विधानसभा को तेस्रो भाग को नागरिक कोड कवर जो सम्पत्तिको अधिकार । म पहिले देखि नै हस्ताक्षर प्रासंगिक व्यवस्था छ, उहाँले भन्नुभयो संग एक बैठक को समयमा मन्त्रीहरु छ । यो एक ऐतिहासिक को स्थापना मा नागरिक कानून र मा एक महत्त्वपूर्ण कदम को नियम सम्बन्धको राज्य, व्यक्तिगत र अर्थशास्त्र । यो एक कुरा को आर्थिक र सामाजिक महत्त्व छ किनभने यो सबै माथि परिभाषित उत्तराधिकार नियम र हटाउँदछ विभिन्न अवरोध, पुटिन भन्नुभयो । यो नियम मा पछिल्लो नागरिक कोड थिए अब उपयुक्त समय छ । तिनीहरूले कारण संघर्ष बीचमा नातेदार भन्दा हक अधिकार र गर्न वृद्धि दिनुभयो सरकारी.
मान्छे को संख्या लागि योग्य वृद्धि गरिएको छ, र नयाँ व्यवस्था वस्तुतः नियम बाहिर स्थानान्तरण को सम्पत्ति को राज्य । यो व्यवस्था ठीक सुरक्षा को अधिकार निसर्त शासकका — नाबालिगहरूको, केही विभाग निर्भर र अरूलाई काम गर्न असमर्थ छ, र लक्ष्य लिएको अन्त गर्न बेईमान हेरफेर को उत्तराधिकार व्यवस्था, पुटिन जोड दिए । परिचय को तेस्रो भाग को नागरिक कोड छ एक जल गर्न सडक मा एक विधान रूपरेखा लागि निजी सम्पत्ति, को अध्यक्ष भन्नुभयो । एक व्यक्तिको प्राकृतिक इच्छा परिणाम आफ्नो जीवनको उपलब्धिहरू आफ्नो सन्तानले सधैं भएको छ र रहनेछ एक शक्तिशाली उत्प्रेरणा सफलतापूर्वक काम र कमाउन र निर्माण सम्म चल्न सक्ने र सम्पत्ति छ । यो एक ऐतिहासिक को समेकन मा एक व्यवस्था छ-आधारित राज्य र.
हाम्रो कानून अब सम्झौता संग मुद्दाहरू छ जो अक्सर राखिएको व्यक्तिहरूलाई एक दोधार मा — कसरी विभाजित गर्न बीचमा शासकका षड्यन्त्र को भूमि, घर, अन्य अचल सम्पत्ति, बैंक जम्मा र व्यापार गतिविधिलाई को अध्यक्ष भन्नुभयो ।
उत्तरजीवी थिएन अनुरोध चिकित्सा परीक्षा देखि रूस - दूतावास मा बेलायत